परमेश्वरको एक असल दास पा. रेमण्ड कोह | eBachan Nepali Christian Magazine
परमेश्वरको एक असल दास पा. रेमण्ड कोह
मैले धेरै लामोसमय देखि व्यीक्तगतरुपमा चिनेका पा. रेमण्ड कोह जसको ह्दय गरिब, असाय र शिक्षाविहीन भएका बालबालिकाहरुको शिक्षा स्वास्थय र सीपको लागि आफनो जीवन अर्पेका एक असल परमेश्वरका दास थिए । करिब हजारौ भाषा मलेशियाका स्थानीय इस्लाम समुदायका बालबालिकाहरुले शिक्षाको ज्योतीको मुहार देखाईरहेकोे बेला इस्लाम समुदायले विभिन्न समयमा पा. रेमण्ड कोहलाई आरोप सहितको ज्यानमार्ने धम्की दिएर बिचलित बनाएको भएता पनि परमेश्वरले दिएको बोलावटलाई निरन्तर सेवामा लागिरहने एक निडर अगुवाको रुपमा स्थापित भएका थिए । सन् २०११मा इस्लामिक धर्मका अगुवाहरले इस्लामिक बालबच्चाहरुलाई इसाईकरण गरिएको आरोपमा ज्याँनमार्ने धम्की आएको बेला समपूर्ण परिवार ३ महिनाभन्दा बढी बेलायतमा शरण लिएर बसेका थिए । पछिल्लो अवस्थामा घरको प्रगानमा बन्दुकको गोलीहरु छाडेर डर र त्रासलिने काम भईरहेको थियो ।
लामो समय अपरेशन मोबिलाइजेसन मलेशियामा कार्यकारिणी निर्देशक भई सर्वागिणि सेवकाईमा विश्वास राख्ने र गर्ने दर्शन लिएर अर्को अगुवाको स्थापनागरी सबै जिम्मेवार दिएर मेथोडिस्ट मण्डलीमा एक पाष्टरको रुपमा सेवकाई गर्दै र सर्वागीणि सेवकाईमा लागिरहेको पा. रेमण्ड कोहलाई फ्रेबु्रअरी १३ तारीख २०१७ का दिन आफना साथीलाई भेटन मलेशियाको पाटलिन जाया जाँदा अज्ञात समूहले अपहरण गरी लगेका कुरा स्थानीय वरपर घरका सिसी क्यामराको फुटेजले देखाएको छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासकका निर्देशकले पा.रेमण्ड कोह अपहरणकारीले अपहरण गरेर लगेको कुरा स्थानीय पत्रकार र टेलिभिजनमार्फत घोषणा गरको महिनौ हुदाँ पनि न त अपहरणकारीलाई पर्कन सकेको छ, न त पा. रेमण्ड कोहलाई सकुशल रिहा नै गरिएको छ ।
अपहरणमा परेको पहिलो साता परिवारजनले पा. रेमण्ड कोहकोबारेका जानकारी दिने वा फर्काएर ल्याउनेलाई एक लाख रिगेट तथा करिब २४ लाख नेपाली रुपैया धनराशीको इनामको घोषणा गरेका थिए । तर त्यो पनि सफल नभएर दोस्रो साता तिर पा. रेमण्ड कोहको छोरा जोनाथन कोहले मेरो बुवाको हत्या भइसकेको छ भन्ने निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । दुखको कुरा महिनौ समय भन्दा बढी हुन लाग्दा पनि मलेशियन प्रहरी प्रशासनको कुनै गम्भिरता नभएको हुदाँ यो घटना निकै रहस्यमय भएको छ ।
पा.रेमण्ड कोहको विषयमा मलेशियन ख्रिष्टीयन महासंघ, समाजहरुले विभिन्न समयमा सरकार समक्ष पा. रेमण्ड कोहको बारेका पहल गरीदिन र सकुशल रिहाकोबारे जानकारी गर्दा पनि यसबारे चासो लिएको देखिन्दैनन्। स्थानीय मण्डलीका अगुवाहरुले र अन्य धर्मलम्बीहरुले समेत समयसमयमा पा. रेमण्ड कोहको लागि मैनबत्ति बालेर विभिन्न स्थानहरुमा प्रार्थनाको सभा आयोजनागरीरहेका छन । विश्व ख्रिष्टियन समुदायहरुले पनि यस विषयलाई निकै गम्भिरता साथ लिएर पैरबी र प्रार्थना गरीरहेका छन् ।
पा. रेमण्ड कोह नेपालीहरुप्रति निकै माया गर्ने र सहयता गर्ने ह्दयभएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । पटक पटक उहाले नेपालको भ्रमणगरी नेपाली मण्डलीलाई सहयोग गरेका थिए भने मलेशियामा भएको नेपालीहरुको माझ सेवागर्न नेपलाी अगुवाहरुको लागि उहाँको मण्डलीले आर्थिक सहयोगगरी नेपाली संगती शुरुगरेका थिए ।
पा. रेमण्ड कोहका एक श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन । दवै सन्तानको विहेवारी भएर पनि नातानातिनी पनि भईसकेको छन ।
किन मलेशियामा ख्रिष्टियनप्रति अन्याय ?
सन् २०२० सम्म इस्लामीक समूहले मलेशियालाई एशियाको एक इस्लामिक नितीनियमको आधारमा स्थापित राष्ट्रको रुपमा चिनाउन भरप्रयाुस भईरहेको छ । इस्लामिक समुदायका मानिसहरुलाई पहिलो स्थान दिई विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्यको र सरकारी क्षेत्रमा सहयोग गरीरहेका छन् । अन्य धर्मालम्वीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक प्रकारले संचालन गरीआएको छ । पटक पटक मलेशियन खी्रष्टियनहरुलाई अल्लाहको नामको अपहेलना गरीयो भन्ने नाउमा मण्डली भवन तोडफोड र जलाउने काम नभएको भन्न सकिन्न । सर्वोच्च अदालतमा अल्लाहको बहसमा मुद्धा समेत भएको थियो । स्थानीय मण्डलीहरुले यसबारे सरकार र अन्य उच्चन्यायलयमा आफनो धर्मको अधिकार र सर्मचनाको लागि पहल गरेतापनि यसबारे खासै मलेशियन सरकारले चासो लिएको देखिन्न । हालका महजिदको ३ किलो मिटरको दूरीमा कुनै अन्य धर्मलम्बीहरुले मठ मन्दिर र चर्च निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था लागुगरेपछि पछिल्लो अवस्थामा मलेशियाको हरेक शहर भित्र र बाहिर हरेर ३ किलो मिटरको दुरीमा नयाँ महजिदहरुको निर्माणलाई जोड दिईएको पाईन्छ ।
विश्वमा निकै चर्चा बटुलिएका आईएससि( इस्लामिक राज्य)ले समेत यस देशलाई एक इस्लामीक राष्ट्रकोरुपमा स्थापित गर्न योगदान दिईरहेको समेत जानकारी आएको छ । सन् २०१० को परिणाम अनुसार ९.३ प्रतिशत ख्रीष्टियनहरु भएको मलेशियामा भुमिगतरुपमा धेरै इस्लामसमूहका विश्वासीहरु पनि रहेको बुझिन्छ ।
मलेशियामा भएका चाईनिज समूदाय, भारतीय, फिलिपिनो, बर्मा, र नेपाली समूदायको मण्डलीहरु विभिन्न शहरहरुमा स्थापित भईसकोको हुदाँ मण्डली र विश्वासीहरुको सुरक्षाको लािग प्रार्थनागर्न हाम्रो जिम्मेबारी रहेको छ । अन्तमा पा.रेमण्ड कोहको स कुशल रिहाई र परिवारजनको लािग प्रार्थनाको लागि हादिृक अनुरोध गर्दछु ।
Previous: रहेनन् प्रशान्त देब
Next: मैले मृत्युको असली रुप देखेको छु